Ma ogtahey duulaanka ka dhanka ah mayorka saylac iyo sababta ? Guulihiisii waxqabad
Saturday April 15, 2017 - 16:09:15 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
Ma dumaalo naagaha ninkey nolol ku dayrshaan. Nin walaalkii dooraday ilaah darajo siinwaaye.
Guntimaha habeen ninkii xidhaa isagaa garta ,ridada warmaha cadawga ayaa dul-yuurara al-baabka xafiiska mayorka saylac kuwaasi oo u halgamaya daminta illayskii u soo daahiray degmada saylac iyo Salal , Waa cid biyaha hoostooda mareysa, oo ka xun oo ka seexan kariweyday guulaha horusocodka leh ee uu foolka soo dhigay intii uu mayor xuseen iidle xilka degmada iyo gobolkaba hayey. (saylacey waxba yaanu xeerkaa kumarin xoolana ku siine xaashee nin libin kaa xisdiyey xumihii waa yaaba ), waa cid neceb horumarka saylac iyo in ay degmada wax u soo kordhaan,waa uur ku dhiigle buka oo ka xun jiritaanka dadka oo leh muxuu alle idiin jirsiiyey ?! waa nacab ay dhexmarayaan fariimaha sharka ee shaydaanku wado kuwaasi lidi ku ah horumarka degmada; Waligeed ba balo uu helaa ninka u dadaalaa, ciil iyo cadho u dhimo oo geerida ku sug diilalyo iyo ciil oo waligaa ha aflixin.
Guux iyo dareen baan arkaa soo gadaal baxaye
Cadaw ii gabbanayaan arkaa gaadmo duurxula’e
Gadhwad iyo hoggaan baan arkaa goostay xadhiggii.